Shiinaha Baaxadda loo adeegsado soosaarka koollada aluminium ee soosaara iyo Warshad | Teng'an
Aluminium ku dheji shamiitada hawada ku jirta
Baaxadda loo isticmaalo koollada aluminium ee fuuqbaxay
Jinka budada ah ee aluminiumka ah ee la duubay waa nooc cusub oo walxo ah oo la soo saaray. Waxaa si aad ah loogu isticmaalay warshado badan sida aerated wakiilka dhaliya gaaska la shito, rashka, metallurgy heerkulka, cadayashada rinjiga qalinka iyo wixii la mid ah.
FOB Qiimaha: US $ 2300 / tan
Tirada ugu yar: 10 / tan
Kartida Bixinta: 1,000 tan bishii
Faahfaahinta xirxirida: 25kg / foosto ama 25kg / bac
Ku saabsan sambal qaadista: Muunad qaadis bilaash ah oo ka yar 5 kg
Baaxadda isticmaalka sheyga
Jinka budada ah ee aluminiumka ah ee la duubay ayaa door muhiim ah ka ciyaaray soo saarista iyo dhismaha warshadaha kala duwan. Isticmaalka ugu weyn ee aagga la taaban karo ee hawada waa falcelinta kiimikada ee silica, budada aluminium, xawaare dheereeya, iwm. Inta lagu gudajiro wax soo saarka si loo gaaro sii deynta gaaska. Sidan oo kale, qaabdhismeedka jilicsan ayaa ka muuqan kara gudaha dhismaha la taaban karo ee la soo saaray.
Jinka budada ah ee aluminiumka ah ee la duubay ayaa sameeyay geedi socod dhammaystiran oo gebi ahaanba ah isticmaalka baloogyada shubka ah ee hawada la mariyay Waa lagama maarmaan in la dhigo dhalada budada ah ee aluminiumka aerated ah aluminium-ka isku qas ah slurry slurry. Ka dib markii dhalada budada ah ee aluminiumka ah ee la shiilay ay sifiican u walaaqday Ku dheji koollada budada aluminiumka ee aerated ah miisaanka culeyska aluminiumka, iyo dhig xaddiga ku habboon ee aluminiumka ku jira bacda aluminiumka ah iyo alaabta ceyriinka ah sida xawaaraha, dambaska duullimaadka iyo gypsum shubida qas, taas oo ay soo saarto falcelinta kiimikada ee udhaxeysa koollada budada ah ee aluminiumka ah iyo walxaha Maaddada alkaline-ka waxay sii deyn kartaa haydarojiin iyo gaasas kale oo ku jira, si loo gaaro saameynta xumbo, si culeyska lebenku soo saaray uu aad u yar yahay marka loo eego alaabooyinka ay soo saaraan habka wax soo saarka dhaqanka, iyo soosaarka kaabayaasha ah ee la mariyo koollada budada ah ee aluminiumka ah ayaa sidoo kale dhammaantood ah Mid ka mid ah noocyada ku habboon ee fudud ee fudud ee wax soo saarka la taaban karo wuxuu noqon karaa xitaa in ka badan kala badh culeyska dhismooyinka shubka bulukeetiga caadiga ah.
1 Awood sare: Waxsoosaarka warshadeena 30 tan oo aluminium ah ku dheji maalin kasta.
2 Heer sare: Khadka wax soo saarka heerka qaran iyo dhoofinta heerka ee baakadeysan.
3 OEM iyo ODM: OEM iyo ODM waa la soo dhaweynayaa.
4 Kooxda adeegga xirfadeed: Waxaan leenahay in ka badan 10 sano oo khibrad wax soo saar ah. Waxaan noqon karnaa markii ugu horreysay ee aad adigu xalliso dhibaatooyinka ku jira habka isticmaalka budada aluminiumka ah.
J: Waxaan nahay warshad leh in ka badan 40 shaqaale xirfad leh.
S: Waa maxay waqtiga dhalmadaada ee amarkan?
J: Caadi ahaan waqtiga keenista waa 5-10 maalmood.Hadii alaabtu keyd tahay ama ay tahay 15-35 maalmood haddii alaabtu aysan oollin, waa sida ay u kala tiro badan yihiin.
S: Miyaad ku dari kartaa calaamadeena calaamadaha alaabta?
J: Haa, Waxaan bixinaa adeegga ku darista astaanta macaamiisha alaabada.
S: Adigu keligaa ma samaysanaysaa?
J: Haa, waxaan nahay.Waxaan leenahay warshad noo gaar ah.Waxaanu soo dhawaynaynaa inaad soo booqato wershedeena wakhti kasta.Waxaan sidoo kale kaa qaadi karnaa garoonka diyaaradaha iyo saldhigga.
S. Ma heli karaa qiimo dhimis?
J: Haa, Amar weyn iyo Macaamiil joogta ah, waxaan siinnaa qiimo dhimis macquul ah.
Haddii aad hayso su'aal kale, ku soo dhowow ila soo xiriir!
Hore: Astaamaha astaamaha budada aluminium
Xiga: Ku saabsan aalado la taaban karo iyo taarikada (AAC / ALC)
saamiga aac block qaybiyey
budada aluminium ee la taaban karo
budada aluminium ee dhismaha dhismaha shubka
Nidaamka wax soo saarka budada Aluminium
Saamaynta budada aluminium ee ku jirta aaladda hawada ...
Tilmaamaha kaydinta iyo isticmaalka sheyga
Ku saabsan aalado la taaban karo iyo taarikada (AAC / ALC)
Mabda'a codsiga ee budada aluminium pa ...
Jinka budada aluminium aqueous
Suqian Teng'an Dhismaha Waxyaabaha Cusub ee Co., Ltd. (oo hore loo oran jiray Huai'an Jiayi Building Material Co., Ltd.)